UNdunankulu uvikele abakwaGupta, uthi ayikho into ewukulawulwa koMbuso | isiZulu
Cape Town – UNdunankulu waseNorth West, uSupra Mahumapelo, usephonsele inselelo abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bavulele amacala obugebengu umndeni wakwaGupta bese beyayeka ukudidanisa inkohlakalo nokulawulwa koMbuso, wathi kuleli ayikho nje into okuthiwa ukulawulwa koMbuso (state capture).
UMahumapelo, nongezinye zezikhulu zikahulumeni ezisolwa ngokuthi sezake zahlangana nabakwaGupta – nabasolwa ngokulawulwa koMbuso – usecele ukuba kuthathwe izinyathelo ezisheshayo ngezinsolo ezithinta lo mndeni.
OLUNYE UDABA: AbakwaGupta baqulisa uNgqongqoshe ‘ngokuvukela’ uZuma
Ekhuluma emhlanganweni wokubhunga ngezidingo zomphakathi ePotchefstroom ngoLwesithathu, uMahumapelo uthe: “Ngifuna usuku lapho (abakwaGupta) bezobekwa khona icala bese belahlwa yicala enkantolo yomthetho… okwamanje kuseyizinkundla zokuxhumana, amaphephandaba, izithangami zabezindaba, iLiliesleaf Farm kanye nokunye (kodwa) ayikho inkantolo yezomthetho esathole noma ubani enecala.”
Yize noma inqwaba yezikhungo isiziqhelelanisile namabhizinisi ayamaniswa nalo mndeni wakwaGupta, kodwa uMahumapelo uthe uhulumeni wakhe awukuzukwenza okufanayo.
“Mhlazane (abakwaGupta) betholakala benecala, lolo wusuku esizoqhelelanisa ngokuphelele uhulumeni waseNorth West kubona,” usho kanje.
Ube esexwayisa ngokuthi uma ngabe ingasingatshwa ngendlela, indaba yabakwaGupta ingagcina isinobuhlanga kanye nomkhankaso obhekiswe kwabomdabu waseNdiya.